म्याराडोना कि पेले ? को महान भन्ने बिवाद अझै पनि निरन्तर चलिरहनेछ – Talking Sports
लियोनल मेस्सी आउनु अघि फुटबलमा को महान भन्ने कहिल्यै नटुङ्गिएको बिवादमा जम्मा दुई खेलाडी संलग्न थिएः डिएको म्याराडोना र पेले ।
यो यस्तो बिवाद थियो जुन बर्षौसम्म छत र बारमा चलिरह्यो, इन्टरनेटमा पनि चल्यो र टेलिभिजनमा पनि ।
बुनोस आएर्समा बुधबार ह्रदयघातका कारण मृत्यु भएका म्याराडोनाले कुनै पनि प्रमुख प्रतियोगितामा शायद इतिहासकै सबैभन्दा प्रेरणादायी प्रदर्शन गर्दै अर्जेन्टिनालाई १९८६ को बिश्वकप थमाए र अस्तित्व पनि खतरामा रहेको नापोलीलाई इटाली र युरोपको उचाइमा पुर्याए ।
पेलेले अभुतपुर्व रुपमा तीन बिश्वकप जिते र निकै सानो शहर सान्तोसलाई बिश्व मानचित्रमा खडा गरिदिए भने न्युयोक कसमसमार्फत अमेरिकामा राज गरे ।
कसको लिगेसी ठूलो भन्ने बिवादले फुटबल जगतलाई यसरी दुई चिरा पारिदियो की म्याराडोनाले फिफाको इन्टरनेट पोलमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउदै २० औं शताब्दीको उत्कृष्ट खेलाडी चुनिदा कराडौं स्तब्ध भए । धेरैलाई असह्य भएपछि दवाबमै फिफाले अर्को पोल आफ्नै फुटबल फ्यामिलीको नाममा खडा गरेपछि पेलेले जिते र पुरस्कार बाडिएको जस्तो देखिएको थियो ।
“एकातर्फ छन् पेले यस्ता स्ट्राइकर जसको क्षेत्र पेनाल्टी बक्स थियो, यस्ता खेलाडी जसले मजाको लागि गाल गरे, खेलकुद मन्त्री पनि भए र तपाईले खोजेको जस्तै शान्त ब्यक्ति बने,” २०१३ मा भोटिङ्गपछि भएको समारोहमा फिफाले भन्यो ।
“अर्को तर्फ छन् म्याराडोना, सम्भवत सबैभन्दा पूर्ण खेलाडी, प्लेमेकर र गोलस्कोरर, प्राविधिक रुपमा निपूण, अविश्वसनीय र मैदान भित्र र बाहिरका सनकी र बर्षौ बिभिन्न समस्याले घेरिएका खेलाडी,” दुवैतर्फ सन्तुलन कायम गर्ने क्रममा फिफाले लेखेको थियो ।
दुई खेलाडीको महानताको बिवादमा अन्य केही पदहरु पनि थपिएर आउथेः अर्जेन्टाइनबिरुद्ध ब्राजिलियन, जनताको छोरा बिरुद्ध संस्थापनका व्यक्ति, पार्टी एनिमलबिरुद्ध शान्त ब्यक्ति र क्रान्तिकारीबिरुद्ध परम्परागत छवि ।
सबैले आ–आफ्नो पक्ष लिन्थे भने दुवै जनाले कहिल्यै पनि एक अर्काप्रति आफ्नो धारणालाई लुकाएर राखेनन् । पेलेलाई म्याराडोना सामाजिक रुपमा स्विकार गर्न नसकिने र नालायक लाग्थ्यो भने म्याराडोनालाई पेले बिकाउ ।
“खेलाडीको रुपमा पेले महान थिए तर उनी राजनैतिक रुपमा बढी सोच्छन्,” म्याराडोनाले सबैभन्दा सरल तरिकाले गरिएको आलोचनामा भनेका थिए । ड्रगको कुलतमा फसेका म्याराडोनालाई भने पेले खराब उदाहरण मान्थे ।
यद्दपि १९७९ म्याराडोना पेलेलाई भेट्न रियो दि जेनेरियो पुग्दा दुवै दक्षिण अमेरिकी खेलाडीहरुले आफ्नो पहिलो भेटलाई निकै न्यानो बनाएका थिए । अब आउदै गरेका नयाँ स्टारलाई आफ्नो सल्लाह–सुझाव दिदा पेले खुशी थिए भने म्याराडोना ब्राजिलियन लेजेण्डलाई भेट्ने सपना पुरा गर्न पाउदा निकै उत्साहित ।
दुईबीचको सम्बन्धमा तब तनाव उत्पन्न भयो जब म्याराडोना स्पेनमा भएको १९८२ बिश्वकपमा ब्राजिलियन खेलाडीलाई खुट्टाले हान्दा सोझै रेडकार्ड खादै मैदानबाट बाहिरिए । त्यसयता दुवै खेलाडी दशकौं सम्म एक अर्काको आलोचनामा बिताउदै कहिलेकाही सम्मान गर्दै क्षतिपुर्ति गर्ने काममा पनि लागेका थिए ।
म्याराडोना ६० पुग्नु एक महिना अघि ८० औं जन्मदिन मनाएका पेलेले म्याराडोनाको मृत्युको खबर सुनेपछि उदार हुदै प्रतिक्रिया दिएका थिए । “मैले निकै राम्रो साथी गुमाए र संसारले एउटा लेजेण्ड,” पेलेले बुधबार भने ।
समुह ‘एफ’: फ्रान्स,जर्मनी र पोर्चुगल अन्तिम १६ मा
यस्तो छ युरो २०२० अन्तिम १६ को खेल तालिका र खेलहरु
रोनाल्डोले गरे अन्तर्राष्‍ट्रिय फुटबलमा सार्वधिक गोल गर्ने किर्तिमानको बराबरी
युरोमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै स्पेन अन्तिम १६ मा
जर्मनीले हङ्गेरीको जितलाई रोक्दै २-२ को बराबरी खेले पछि पोर्चुगल युरो २०२० को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ । पोर्चुगलले आफ्नो अन्तिम खेलमा फ्रान्सलाई पनि २-२ को बराबरीमा रोकेको थियो ।
जर्मनीका लागि काई ह्वाभर्ट्ज र लियोन गोरेट्ज्काले गोल गरेका थिए । हङ्गेरीका लागि एडम सज्लाई र अन्द्रास ससेफरले गोल गरेका थिए ।
खेलको ११ औँ मिनेटमै सज्लाईले हङ्गेरीलाई अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो हाफ अग्रता लिएको हङ्गेरीले दोस्रो हाफको ६६ औँ मिनेटमा बराबरी गोल फर्काएका थिए । जर्मनीका लागि काइ ह्वाभर्ट्जले गोल गरेका थिए । तर, त्यस्को एक मिनेट पनि नबित्दै हङ्गेरीले खेलमा पुन : अग्रता लिएको थियो । ससेफरले गोल गर्दै हङ्गेरीलाई २-१ को अग्रता दिलाएका थिए ।
तर, ८४ औँ मिनेटमा जर्मनीका लागि लिओन गोरेट्ज्काले बराबरी गोल फर्काउँदै जर्मनीको अन्तिम १६ को आशा जिवितै राखेका थिए । अर्को खेलमा पोर्चुगलले फ्रान्सलाई २-२ को बराबरीमा रोक्यो । पोर्चुगलका लागि क्रिष्चियानो रोनाल्डोले दुई र फ्रान्सका लागि कारीम बेन्जेमाले दुई गोल गरेका थिए । पोर्चुगलका लागि दुवै गोल पेनाल्टीमा रोनाल्डोले गरे । फ्रान्सका लागि बेन्जेमाले एक गोल पेनाल्टी मार्फत गर्दा अर्को गोल ‘ओपन प्ले’ मा गरेका थिए ।
अपराजित फ्रान्सले ३ खेलमा ५ अंक जोड्यो । जर्मनीले आफ्नो खेलमा हंगेरीसँग २-२ को बराबरी खेलेपछि ४ अंक जोड्दै दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । समान अंक भएपनि हेड टु हेडमा पोर्चुगल तेस्रो हुँदै अन्तिम १६ मा स्थान बनाएको छ ।
युरो २०२० को सबै समुह चरणको खेलहरु सकिएको छ । समुह ‘ए’ बाट इटाली समुह बिजेता , वेल्स उपाबिजेता र स्विट्जरल्याण्ड उत्कृष्ट तेस्रो स्थानका साथ अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेका थिए । समुह ‘बी’ बाट बेल्जियम समुह बिजेता र डेनमार्क समुह उपबिजेता बन्दै अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेका थिए ।
समुह ‘सी’ बाट नेदर्ल्याण्ड्स, अष्ट्रिया र उत्कृष्ट तेस्रो स्थानको टोली बन्दै युक्रेन अन्तिम १६ मा पुगेको थियो । यस्तै समुह ‘डी’ बाट पनि तीन टोली अन्तिम १६ मा पुगेका छन् । समुह बिजेता बन्दै इङ्ल्याण्ड, उपबिजेता बन्दै क्रोएसिया र उत्कृष्ट तेस्रो स्थानको चेक रिपब्लिक अन्तिम १६ मा पुगेका हुन् । समुह ‘ई’ बाट भने स्विडेन र स्पेनले अन्तिम १६ मा स्थान बनाए । ग्रुप अफ देथ मानिएको समुह ‘एफ’ बाट फ्रान्स समुह बिजेता, जर्मनी उपबिजेता र पोर्चुगल तेस्रो स्थानमा रहदै अन्तिम १६ मा स्थान बनायो ।
समुह चरणको अन्तिम खेलसँगै अन्तिम १६ को खेल तालिका र खेलहरु यस्तो रहेको छ :
जुन २६, शनिबार- नेपाली समय ९:४५ बजे
वेल्स भर्सेस डेनमार्क
जुन २७, आईतबार- नेपाली समय १२:४५ बजे
इटाली भर्सेस अष्ट्रिया
जुन २७, आईतबार – नेपाली समय ९:४५
नेदरल्याण्ड्स भर्सेस चेक रिपब्लिक
जुन २८, सोमबार- नेपाली समय १२:४५
बेल्जियम भर्सेस पोर्चुगल
जुन २९, सोमबार- नेपाली समय ९:४५
क्रोएसिया भर्सेस स्पेन
जुन २९, मंगलबार- नेपाली समय १२:४५
फ्रान्स भर्सेस स्विट्जरल्याण्ड
जुन ३०, मंगलबार- नेपाली समय ९:४५
इङ्ल्याण्ड भर्सेस जर्मनी
जुन ३०, वुधबार- नेपाली समय १२:४५
स्विडेन भर्सेस युक्रेन
फ्रान्स विरुद्ध जारी युरो २०२० को खेलमा दुई पेनाल्टी प्रहार गर्दै पोर्चुगलका कप्तान क्रिष्टियानो रोनाल्डोले अन्तर्राष्‍ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने किर्तिमानको बराबरी गरेका छन् ।
उनले ईरानका अली दाईको १ सय ९ गोल को किर्तिमानलाई बराबरी गरेका हुन् । उनले फ्रान्स विरुद्ध पेनाल्टीमा गोल गर्दै किर्तिमानी बराबरी गरेका हुन् ।
रोनाल्डोले पहिलो गोल ३० औँ मिनेटमा गरेका थिए । डनिलोलाई फ्रान्सका गोलरक्षक ह्युगो लोरिसले पन्च गरे पछि पाएको पेनाल्टी अवसरमा रोनाल्डोले पहिलो गोल गरेका थिए । यस्तै ६० औँ मिनेटमा रोनल्डोकै क्रसमा फ्रेन्च डिफेन्डर कोनाटेको हातमा बल लागे पछि पाएको पेनाल्टीमा रोनाल्डोले दोस्रो गोल गरेका थिए ।
रोनाल्डोले युरो २०२० मा पाँच गोल पनि गरिसकेका छन् । उनी हाल युरो कपमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी पनि हुन् ।
उनले २००३ मा पोर्चुगलको राष्ट्रिय टोलीका लागि डेब्यु गरेका थिए ।
रोनाल्डोले गोल गरेका सबै राष्ट्रिय टोलीहरु:
Euro 202053 mins ago
बटलरको अविजित अर्धशतकमा इंग्ल्यान्डको सहज जित
अन्तर्राष्ट्रिय9 hours ago
युरो कप: स्पेन नक आउटमा छनौट हुनको लागि के हुनुपर्छ ?
डि ब्रुनलाई चेल्सीबाट बेच्न नखोजेको सात वर्ष पछि माउरिन्होको खुलासा
अष्ट्रेलियन प्रशिक्षक ग्राहम आर्नोल्ड भन्छन्: “नेपाली टोलीका लागि मेरो निकै सम्मान छ”
म्यानचेस्टर सिटी र चेल्सीः बाहिरियादेखि युरोपियन एलिटसम्म
लेख2 weeks ago
दुई बर्षका लागि बेकह्यामको इन्टर मायामीमा खेल्दै मेस्सी
‘गोर्खाली हो ! १० खेलाडी होस वा ११ खेलाडी डटेर खेल्नु थियो’ – अब्दुल्लाह अल्मुताइरी
मैदानमा डेनिस स्टार ऐरिक्सन अचेत हुँँदै ढलेपछि युरो कपमा तनाव (भिडियो)